Ukuphupha anvil Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
I-anvil isetyenziswa njengesiseko sokubumba kwaye ngokubanzi yenziwe ngentsimbi eqinileyo. Isinyithi eshushu sisebenza kwaye sibunjwe kwi-anvil ngoncedo lweeplisi kunye nesando. Esi sixhobo sinokulinganisa ubunzima beekhilogram ezi-2 kuphela, kodwa nama-500.
Kutheni ufumene uphawu lwephupha "i-anvil" ngelixa ulele? Inokuchazwa njani? Nika ingqalelo kuzo zonke iinkcukacha zephupha lakho kwaye uzibandakanye kutoliko lwakho. Ngaba ukhe wasebenza kwi-anvil ngokwakho okanye wajonga omnye umntu emsebenzini? Ngaba isikhitshana sitshatyalalisiwe?
Kuya kufuneka uziqwalasele zonke ezi nkcukacha. Kungenxa yokuba nokuba into encinci inokuba nefuthe lesigqibo kutoliko oluchanekileyo lwamaphupha.
1 Uphawu lwephupha «i-anvil» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «i-anvil» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «i-anvil» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «i-anvil» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, uphawu lwephupha "anvil" lumele ikakhulu i okwakhiwaukuba ukuphupha kungasebenzisa ngendlela enentsingiselo, ngokunjalo amandla kakhulu. Ukongeza, i-anvil ifanekisela ephupheni amandla amakhulu endalo, apho umphuphi kufuneka azilinganise ngoku.
Ngokunxulumene nesimboli yephupha, kukho iimeko ezahlukeneyo zamaphupha ezinokutolikwa ngokwahlukileyo kutoliko jikelele lwephupha. Umbono we-anvil ephupheni unokuphulukana nokulala kumdlalo. Iimpikiswano yiza nabahlobo el mundo ukuvuka.
Ukubethelela isikhonkwane ephupheni kunika iphupha isibonakaliso sokuba ufuna ukufezekisa into ngokunyanzela kwihlabathi elivusayo, nangona kunjalo kungasayi kubakho sithsaba sempumelelo. Ukuba umphuphi ngomonde uqhubekeka nomsebenzi wakhe kwisitayile ngelixa elele, angasebenza ngokuzimisela nangobulumko ukushiya ngasemva izinto ezinzima. Ukuba umsebenzi wakho ulungile ebuthongweni, ukuphupha kunokuba kukuvuka ebomini. Izinzuzo themba kwikamva elikufutshane.
Ukukhanya kwesinyithi kunye neentlantsi kukwathetha ukuba amaphupha ngokuchazwa kwephupha ngokubanzi. uvuyo emsebenzini, umzekelo, njengomkhandi weentsimbi. Ukusebenza okanye ukubetha i-anvil kunokutolikwa njengomzamo kunye nobunzima ekuphupheni. Indlela yakho yobomi iya kuphinda ivele. Oku kunokuhamba kunye nempumelelo okanye kubuguqule bonke ubukho bakho ujonge ezantsi, omabini amacala anokwenzeka, kuxhomekeke kwinto iphupha eliyenzayo kumqondiso.
Anvil ukuwa njengophawu lwephupha kukuchazwa ngokubanzi kwamaphupha njenge ukungcangcazela ukutya okuchaziweyo. Indawo eyaphukileyo ephupheni ifuna ukubonisa umphuphi ukuba akahoywanga kwaye uphulukene namathuba amahle.
Kumlimi, uphawu lwephupha "anvil" luphawu a isivuno esityebileyo. Ukuba abafazi baphupha i-anvil, iphupha libabonisa ukuba banazo zonke iindlela zokuphumelela ezandleni zabo. Kodwa ukuze baphumelele ngokwenyani, kufuneka basebenze phantsi kweemeko ezinzima.
Uphawu lwephupha «i-anvil» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha kutolika isimboli yephupha «i-anvil» njengenqaku elivela kwinto engekho zingqondweni xa uphupha ngaphezulu Ukuzithemba. Ukuphupha kufanele ukuba kungaphezulu kwesando kunesikhonkwane, Oko kukuthi, kuya kufuneka uthathe ithamsanqa lakho ezandleni zakho kwaye unakekele ukuba utshintsho olulandelayo luyathandeka okanye aluthandeki.
Ukuba iphupha liyazisebenzela kwi-anvil ngelixa elele, ufuna ukususa into emphefumlweni wakhe, ngokwenkcazo yengqondo yephupha, eliye lamcinezela. Kuya kufuneka ushiye into ngasemva kwihlabathi lokuvuka.
Ukuba ephupheni abanye abantu babetha i-anvil, oku kunokuchazwa njengomqondiso wephupha lokuba abanye abantu baya kumenza athobele kwaye amrhwebeshele kwindlela engathandekiyo kuye. Anvil ewayo okanye etsiba njengophawu lwephupha yenye isilumkiso ngokuphupha ngaphambi kokuphela komsitho ongathandekiyo onokuthi ubutshintshe ngokupheleleyo ubomi bakho obongezelelweyo ngokungalunganga.
Uphawu lwephupha «i-anvil» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, uphawu lwephupha "isanvil" ludala unxibelelwano noothixo baseNorse bobugcisa bokwenza blacksmithing. I-anvil idlulisa umyalezo ogqithileyo wokuba apha kuya kwenziwa ubomi obutsha, imigaqo-nkqubo iyakudalwa, kwaye izinto ezintsha ziya kusetwa. Kwakhona, i-anvil ifanekisela ukutolikwa kwamaphupha okomoya. ukunyaniseka, inkalipho y Amandla.